ShweMinThar: နှင်းဆီပန်း (Rose) စိုက်​ပျိုး​ရေး ဗဟုသုတ
နှင်းဆီဆိုတဲ့စကားဟာ အမျိုးသမီးဘက်ကိုအားသန်တဲ့အမျိုးအစားမို့ အမျိုးများရဲ့
လို့ သူ့ရဲ့ရနံ့လေးကတော့ တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ နှင်းဆီရနံ့ပေါ့လေ။ ရနံ့ကတော့ရေပန်း
သိပ်မစားပေမယ့် သူ့ရဲ့ပင်ကို ပွင့်ဖတ်၊ ပွင့်လွှာကတော့ သူတကာတို့ရဲ့အသဲစွဲဖြစ်ပါ
တယ်။.ဒါကြောင့်မို့ အလှဆင်တဲ့နေရာမှာ နှင်းဆီးပန်းကတော့ မပါမဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာ
နေရာရထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်အလှကြောင့်မို့လို့ အမျိုးအစားအလိုက် ဈေးအမျိုး
မျိုးတင်ကစားပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ ရောင်းချရပါတယ်။ အပင်ရယ် အပွင့်ရယ် ရေ
ရှည်ခံတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့စွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ သူ့ရဲ့ပွင့်လွှာတည်ဆောက်
ပုံကြောင့် အများစုက သူ့ကိုကြိုက်ကြသလိုမျိုး နေရာတိုင်း အိမ်တိုင်းလိုလို ပန်းခြံတိုင်း
လိုလိုမှာ အလှအဖြစ်စိုက်ထားကြတာများပါတယ်။ အများစုကတော့ အလှအဖြစ်အတွက်
ဆိုရင်တော့ အိုးနဲ့ပဲစိုက်ကြတာများပါတယ်။ ကိုင်းအရင့်ကိုကူးပြီး စိုက်ရတာလည်လွယ်
ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုတော့ ဂရုစိုက်ပေးရမယ့်အမျိုးအစားပါ။ မြေပုပ်မြေဆွေး
နွားချေး စာသည်ရောထားသည့် မြေပုပ်မြေဆွေးကိုကြိုက်နှစ်သက်သလိုမျိုး ပုံမှန်လည်း
ရေလောင်းပေးရ မကြာခဏဆိုသလို မြေကိုလည်းဆွပေးရပါတယ်။
သူကို့ တစ်ခါစိုက်ပေးရုံဖြင့် ဂရုစိုက်နိုင်သည့်အလျှောက် သက်ရှည်ပင်မျိုးလည်းဖြစ်ပါ
တယ်။ သူ့ရဲ့အပွင့်ကတော့ သူ့ရဲ့အတက်အားလျော်စွာ ပွင့်လာပါတယ်။ ဆိုတော့
ပွင့်ချိန်ကုန်သည့်အခါ သူ့ရဲ့ကိုင်းအရင့်ကိုလည်း ညှပ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။
နှင်းဆီရဲ့ အတက်ထွက်ချိန် ရွက်နုထွက်ချိန်ကတော့ ရာသိဥတု နေရာဒေသအားလျော်
စွာ အများစု ဖေဖေါ်ဝါရီလ.နှင့်မတ်လဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလဆိုရင်တော့ အဖူးတွေစုံသ
လောက် အပွင့်တွေလည်းပွင့်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်ရဲကိုတွေ့သက်သက်သာ
ပန်းအလှစိုက်ပျိုးဖို့ စိတ်ဝင်စားပြီဆိုတာနဲ့ နှင်းဆီပင်ဟာ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်ချင်တဲ့ အပင်ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့အဆင်းအလှနှင့် တော်ဝင်နန်းဆန်တဲ့ အပွင့်သဏ္ဍာန်၊ သင်းပျံ့ရစ်မူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရနံ့မွှေးပျံ့မှုတွေက အခြားအပင်တွေထက် ဆွဲဆောင်အား ပိုကောင်းနေတာကိုး။ အဲဒီလိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့သူ့ကို စိုက်ပျိုးမယ် ဆိုရင်တော့ အထူးသတိထားရမဲ့ အချက်တွေကိုလည်း မေ့မနေသင့်ပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးက အအေးပိုင်းဒေသတွေမှာ ရာသီဥတု ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြောင်းအလဲဒါဏ်ကို ကြံကြံခံနိုင်ဖို့ပါပဲ။ အအေးပိုင်း အပူချိန်တွေရဲ့ အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်ဟာ အပင်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အပူချိန်ဖြစ်ရမယ်။
မိုးခေါင်ရာသီဥတုဖြစ်နေပေမဲ့၊ စိုစွတ်မှုမြင့်မားပြီး အားနည်းတဲ့ မြေဆီလွှာတွေကို နှင်းဆီပင်တွေ ပိုမိုနှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေမှာဆို အောင်မြင်ဖို့ ပိုများပြီး သာမန်ဂရုစိုက်မှုထက် လျှော့နည်းတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါ နှင်းဆီပင်စိုက်တော့မယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုးရေးမြတ်နိုးတဲ့ တနည်း နှင်းဆီကိုချစ်ကြတဲ့ နှင်းဆီသခင်တွေ မြို့နယ်အတော်များများမှာ အဖွဲ့လေး သဘောမျိုး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ နှင်းဆီစိုက်ပျိုးတဲ့ အတွေ့အကြုံများစွာရှိတော့ ခုမှစိုက်ပျိုးမဲ့သူတွေကို အကူအညီတွေ အကြံဥာဏ်တွေ စိတ်အားတတ်ကြွစွာ ပေးတတ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ နှင်းဆီပင်ကို အမျိုးအစား (၂) မျိုးရနိုင်ပါတယ်။ မြစ်ပွားအပင်(bare-root) အဖြစ်တစ်မျိုး၊ ပန်းအိုးနှင့် ပျိုးပင်(in containers) အဖြစ်တစ်မျိုး ရောင်းချတတ်ကြပါတယ်။
မြစ်ပွားပင်တွေကတော့ အမြုံပင်တွေလိုပါပဲ။ သူတို့မှာ အကိုင်းပဲရှိပြီး အရွက်မပါပါဘူး။ အမြစ်ကတော့ မြေကြီးနှင့် ထားပါတယ်။ ပျိုးခြံတွေမှာ လူအများစု သဘောကျတတ်တာတော့ မြစ်ပွားပင်ကိုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြစ်ပွားပင်တွေက သာမန်အားဖြင့် ရောင်းချရတာနှင့် ပို့ဆောင်သယ်ယူတာ အဆင်ပြေပြီး စိုက်ပျိုးရမဲ့ အချိန် (နွေဦးရာသီဖြစ်ဖြစ်၊ ဆောင်းဦးရာသီဖြစ်ဖြစ်) နဲ့ သင့်လျှော်လို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က မြစ်ပွားပင်(bear-root) တွေကို ချက်ချင်းမစိုက်နိုင်သေးရင်လည်း အပူချိန် (၅၀)ဒီဂရီအောက်ရှိတဲ့ နေရာမှာ သိမ်းထားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ထားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ သန္ဓေမပျက်စီးနိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းတဲ့နေရာမှာ ထားရင်လည်း မသေနိုင်ပါဘူး။
ပန်းအိုးနှင့်ပျိုးထားတဲ့ အပင်တွေကတော့ ထုံးစံအားဖြင့် မြစ်ပွားပင်တွေထက် ဈေးကြီးပြီး ရနိုင်တာမှာလည်း အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ အပင် ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာ ကြီးထွားဖို့ရာလည်း ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ နောက် အပင်ရဲ့ အမြစ်တွေဟာ ပန်းအိုးအပေါ်တတ်လာရင်ပဲဖြစ်စေ။ ပန်းအိုးအောက်ကနေထိုးထွက်နေရင်ပဲဖြစ်စေ အဲဒီအပင်ဟာ အဲဒီပန်းအိုးအတွက် အရမ်းရှည်နေတတ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပန်းအိုး နှင်းဆီပျိုးပင်တွေကို နွေဦးရာသီတွေနှင့် နွေရာသီအလယ်ပိုင်းတွေမှာ ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းရာသီ အဦးအစတွေမှာ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့သမပိုင်းတွေမှာ စိုက်ရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
နှင်းဆီပင်တွေဟာ မြေဆီလွှာမျိုးစုံမှာ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ အဲ...လိုအပ်တာက ရေဆင်းကောင်းဖို့နဲ့ အရမ်းမခြောက်သွေ့အောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါ။ နှင်းဆီစိုက်ပျိုးတဲ့မြေထဲမှာ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း(မြေသြဇာ) တွေများစွာ ပါဝင်နေရပါမယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေဟာ မြေဆီလွှာအတွက် အဟာရပြည့်ဝနေစေပြီး အပင်ရဲ့ အမြစ်တွေ မြေကြီးကို လွယ်ကူစွာ ထိုးဖောက်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးရမှာပါ။ နောက် မြေကြီးကို ပျော့ပြဲမနေဘဲ ရေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင် အကူအညီပေးဖို့ပါ။ နှင်းဆီပင်ရဲ့ အမြစ်တွေဟာ အရမ်းခြောက်လွန်းရင် မကောင်းသလို၊ ရေတွေ အရမ်းစိုစွက်ပြီးမြေဆီလွှာ နုညံ့ပျော့ပြဲလွန်း နေရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။
နှင်းဆီပင် စိုက်ပျိုးဖို့ ပျိုးပင်အများကြီးမမှာယူခင်မှာ အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာက ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ မြေဆီစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သင့်တာပါ။ မြေဆီစမ်းသပ်ခြင်းက ကုန်ကျစာရိတ်ပိုသက်သာစေသလို ဓါတ်ခွဲခန်းက နှင်းဆီစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် လိုအပ်မယ့် မြေရရှိဖို့ ဓါတ်မြေသြဇာရောစပ်ခြင်းကို ချိန်ညှို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (နှင်းဆီပင်တွေဟာ အက်ဆစ်ဓါတ် အနည်းငယ်ကဲသော မြေဆီလွှာကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။)
သာမန်အားဖြင့် သင်စိုက်ပျိုးမယ့် မြေဆီလွှာဟာ ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းဖြစ်စေ နှင်းဆီပင်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေမယ်ဆို ထည့်နိုင်ပါတယ်။ နှင်းဆီဂုရု (Rosarians; as rose experts are called) ရိုစာရီးယန်းတွေက အကောင်းဆုံး ဥယျာဉ်မြေဆီရောစပ်နည်းတွေ အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းနှင့်ညီမျှတဲ့ ပမာဏရရှိအောင် မြေသြဇာ၊ သစ်ဆွေးမြေ၊ မြေဆွေး၊ ရေညှိုမြေဆွေး အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနှင့် အတူ သဲမြေ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းကို ရောစပ်ပေးရပါတယ်။ သဲမြေထည့်တာကတော့ ရေဆင်းကောင်းအောင် ထည့်ပေးရတာပါ။ အားနည်းတဲ့ မြေဆီလွှာတွေမှာ ဖြည့်ထည့်မှု ပမာဏပိုမိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ၁၆လက်မမှ ၂၀လက်မအထိရှိတဲ့ မြေလွှာ ခင်းပေးပြီး အဲဒီပေါ်မှာ မြေဆွေးတွေ ထည့်ပေးပြီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ နှင်းဆီပင်တွေကို သီးခြားစီ စိုက်နိုင်ဖို့ ခုနက မြေတွေ ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ မြေလွှာမှာ အပင်စိုက်ဖို့ ကျင်းတူးရပါတော့မယ်။ ကျင်းကို ခပ်ကြီးကြီးလေး တူးပေးသင့်ပါတယ်။ (၁၈)လက်မ ပတ်လည် အကျယ်၊ အနက် လောက်ထားသင့်ပြီး လိုအပ်သလို အဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင် တူးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖြည့်မြေတူးထားတာ နည်းရင် အန္တရယ်များပါတယ်။ မူလမြေဆီလွှာ အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာ အမြစ်တွေဟာ အပြင်ကမြေဆီကို မထိုးဖောက်နိုင်မှာကြောင့်ပါပဲ။ ဘယ်နှင်းဆီအမျိုးအစားက မူလလက်ခံမြေနှင့် အဆင်ပြေသလဲဆိုတာကို ဒေသခံနှင်းဆီစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေနှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ နှင်းဆီရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်မဲ့ အချက်တွေကို မစိုက်ပျိုးခင် စိတ်ကျေနပ်မှုရသည်ထိအောင် ရှာဖွေလေ့လာရမှာပါ။
နောက် အရေးအကြီးဆုံး မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ရေဆင်းကောင်းခြင်းပါ။ စိုက်ပျိုးမဲ့ မြေဟာ ရေဆင်းကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် (၁)ပေပတ်လည် ကျင်းတစ်ကျင်းတူးလိုက်ပြီး ရေအပြည့်ဖြည့်ထားပေးပါ။ တစ်နာရီအတွင်း ရေအကုန်ခန်းမသွားဘူးဆိုရင် ရေဆင်းကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ရေနည်းနည်းပဲကျန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဓါတုပစ္စည်းအနည်းထည့်ပေးပြီးဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အများကြီးကျန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အမြစ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာ တစ်ဝိုက်မှာ ရေဆင်းပိုက် တပ်ဆင်ပေးထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုလောက်ဆို ရင် မြေဆီလွှာအတွက်အတော်လေး အချက်အလက်စုံလင်သွားလောက်ပါပီ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါ တကယ်စိုက်ပျိုးချိန်မှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကတော့ အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မှာပါပဲ။
နှင်းဆီပင်များဟာ စိုက်ပျိုးရတာ လွယ်ကူတဲ့ အပင်တွေပါပဲ။ အဲ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေတာက နှင်းဆီပင်ရဲ့ ဖူးပွင့်လာမဲ့ အကိုင်းအခက်တွေ ဘယ်ဘက်ကို ရှင်သန်ကြီးထွားစေမလဲဆိုတာပါပဲ။ များစွာသောနာမည်ကြီးထင်ရှားတဲ့ နှင်းဆီပင်အမျိုးအစားတွေဟာ သူတို့ဘာသာကြီးထွားတာထက် တခြားအမှီတစ်ခုပေါ်မှာ မှီပြီး ကြီးထွားတတ်ပါတယ်။ နှင်းဆီပင်တွေကို သူ့တို့ပင်စည်မှာပဲသူ့ဘာသာ ကြီးထွားစေချင်ယင်တော့ ကွင်းပြင်ထဲမှာ အမြင့်ညီညီထားပြီး စိုက်ပျိုးခြင်းပါပဲ။ အများအားဖြင့် အပင်ရဲ့ အခြေမှာတော့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှု လျှော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
#မြစ်ပွားနှင်းဆ်ီပင်BARE-ROOT ROSES) စိုက်ပျိုးခြင်း
၂။ မြေခင်းအလှလုပ်ထားတဲ့ မြေနေရာမှာ ဖြစ်နေပါစေ သင့်တော်ကြီးမားတဲ့ မြေကျင်းတူးပေးပါ။ ကျင်းအောက်ခြေမှာ အပင်ရဲ့ပင်စည်ကိုင်းနေရာကို မြေပေါ်မှာ သေချာထား နိုင်လောက်တဲ့အထိ မြေစာခဲများကို စုပုံပေးပါ။
၃။ အမြစ်တွေကို မြေစာခဲပုံပေါ်မှာ ဖြန့်တင်ပေးလိုက်ပါ။ ကျင်းမှာထည့်ဖို့ အရမ်းရှည်လွန်းနေလျှင် အနည်းငယ်ဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။ အမြစ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ မြေကို လေမခိုအောင်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ပြီး ကျင်းတစ်ဝက် ပြည့်တဲ့ အထိဖြည့်ပေးပါ။
၄။ အမြစ်တွေနှင့်မြေကြီးတွေ ရေရွဲရွဲစိုအောင် လောင်ပေးပါ။ နောက် ရေကို စီးထွက်သွားစေပြီး မြေကြီးထည့်ပေးပါ။ နောက်ရေထပ်လောင်းပါ။
၆။ အဲဒီနောက် ပင်စည်ခေါက်တွေမခြောက်သွေ့အောင် ပြုလုပ်ထားပေးရပါမယ်။ မြေဆွေးခဲတွေ၊ မြေစိုင်ခဲတွေက ရေငွေ့ပြန်တာကို ထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေညှိုမြေဆွေးများကို အပင်ကျင်းရဲ့ပတ်လည်မှာ ၁လက်မနီးပါးအထူအထိ ထည့်ပေးခြင်းကလည်း ရေမခြောက်အောင် ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
#ပန်းအိုးနှင်းဆီပင် (CONTAINER- GROWN ROSES)ကိုစိုက်ပျိုးခြင်း
၁။ မစိုက်ခင် ပန်းအိုးထဲကမြေများကို စွတ်စိုအောင် လုပ်ပါ။ မြေကြီးမှာ စွတ်စို(ပျော့ပြဲနေအောင် ရွဲရွဲမစိုသင့်ပါ) လာလျှင် ပန်းအိုးကို လှီးထုတ်ခြင်း ခွဲခြင်းပြုလုပ်ပေးပါ။ အမြစ်အုံကို ဖြစ်နိုင်သမျှ မထိခိုက်မိအောင်ဂရုစိုက်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးထိခိုက်မှုသာ ဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ရမည်။ အမြစ်များစွာမှာ ပန်းအိုးမျက်နှာပြင်တွင် တွယ်ကပ်နေတတ်သဖြင့် ဖြည်းညှင်းစွာသာ အမြစ်ရှုပ်ထွေးများကို ဖယ်ရှားပေးပါ။
၂။ မြေကျင်းထဲသို့ ဂရုတစိုက်နေရာချထားပေးပါ။ ရှုပ်ထွေးနေသော မြစ်မွှာများကို ဖြန့်ကာ နေရာချပေးပါ။ အထူးသဖြင့် အပင်၏ အမြစ်အုံကို ပြန်မထွေးအောင် ဂရုပြုရပါမယ်။ အမြစ်အုံအောက်၌ ပင်စည်အကိုင်း အနေအထားမှန်ကန်သည်အထိရအောင် မြေသားများဖြန့်ခင်း စီစဉ်ပေးပါ။
သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ခြင်းကလည်း ချစ်စရာအိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်ေ လးတွေမွေးရသလိုပါပဲ။ သူ့ကို ဂရုတစိုက်ပြုစုပေးဖို့၊ လိုအပ်ချိန်မှာ ရေလောင်း၊ မြေဆီကျွေးစတာတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နှင်းဆီပင်တွေကတော့ ဂရုစိုက်မှုအထူးလိုအပ်တဲ့ အပင်တွေပါပဲ။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ နှင်းဆီတွေဟာ မြေဆီအလွန်စားပြီး အင်မတန်ဆာလောင်တတ်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။ တနည်းပြောရရင် လိုအပ်ချက်တွေ အင်မတန်များတဲ့ အပင်ပေါ့ဗျာ။ သူ့ကိုစိုက်ထားတဲ့မြေဟာ ဗွက်ထနေအောင် စိုစွတ်ဖို့ မလိုအပ်ပေမဲ့ အစိုဓါတ်အမြဲရှိနေဖို့ လိုအပ်နေတတ်ပါတယ်။
ရေလောင်းတဲ့အခါမှာလည်း မြေအောက် (စိုက်ပျိုးအပင်ရဲ့ အမြစ်ဇုံတည်ရှိတဲ့) ၁၆လက်မ ၁၇လက်မလောက်အထိ စွတ်စိုနေအောင်လောင်းရမှာပါ။ ကိုယ်စိုက်ပျိုးချင်တဲ့ မြေမှာ ရေဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ စမ်းသပ်ချင်ယင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ (ရေဆွဲပုံး၊ ရေပိုက်၊ ရေမွှားရေပန်း စသည်ဖြင့်) နည်းစနစ်တစ်ခုခုနဲ့ လုံလောက်နိုင်ပြီလို့ ထင်တဲ့ အထိရေလောင်းပေးပါ။ အဲဒီနောက် လောင်းလိုက်တဲ့ ရေ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ မြေကြီးထဲ အမှန်တကယ် စိမ့်ဝင်နိုင်သလဲဆိုတာ မြေကြီး ကိုတူးကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီးလောင်းဖို့ ချင့်ချိန်ရတော့မှာပေါ့။ လက်တွေ့အပင်လောင်းပြီဆိုရင်တော့ အပင်ရဲ့ အနီးတ၀ိုက်နားမှာ ၃လက်မလောက် ကျင်းလေးတူးလိုက်ပါ။ နောက်ရေလောင်းပြီးနောက် အဲဒီအနက်အထိ စွတ်စိုနေရင် စောင့်နေလိုက်ပါ နောက် ခြောက်သွားပြီဆိုမှ ခုနက မစိုက်ခင် တိုင်းတာပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ပမာဏထိ လောင်းပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီနည်းကတော့ လက်တွေ့ရေလောင်းရာမှာ လိုအပ်သလောက် ပမာဏရရှိအောင် ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တစ်ခုပါ။
နောက်အပင်ရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့မြေသြဇာ ကို အချိန်ဇယားနှင့် ကျွေးပေးရမှာပါ။ ဥယျာဉ်မှူးအများစုဟာ အဲဒီဇယားကို အတော်လေး ဂရုတစိုက်လိုက်နာကြပါတယ်။ နောက် မြေသြဇာကိုလည်း အရည်ဖြစ်စေ၊ အစေ့အလုံးဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် နှင်းဆီအတွက် အထူးဖော်စပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်စေ ရွေးချယ်ရမှာပါ။
နွေဦးရာသီအစောပိုင်းမှာ ကိုင်းခွဲထွက်လာတတ်တဲ့ နှင်းဆီမျိုးပွား အသစ်တွေ၊ နှင်းဆီအပင်အိုကြီးတွေ နှင့် နွယ်တတ်သွားတဲ့ နှင်းဆီပင်တွေကို မြေသြဇာပြည့်ပြည်၀၀ သီးသန်း ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ မူလမြေဆီမှာ မြေသြဇာဓါတ်ပြည့်ဝနေလျှင်တော့ မြေသြဇာ(Fertilizers) ထပ်မကျွေးပဲ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ဖူးပွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဖူးပွင့်ဖို့အတွက်တော့ မြေသြဇာ(Fertilizers)ထပ်ကျွေးရပါမယ်။
မော်ဒန်နှင်းဆီပင်တွေကတော့ ကြီးထွားနေချိန်အတွင်း ပုံမှန်ကျွေးနေဖို့လိုပါတယ်။ နှင်းဆီပင်သစ်ကလေးတွေကို စိုက်ပျိုးပြီး တစ်လလောက်ထိ မြေသြဇာ ကျွေးရပါမယ်။ အကိုင်းတွေမှာ အရွက်သစ်ကလေးတွေ ထွက်လာချိန်မှာ ကျိုးပဲ့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အကိုင်းအခက်များကိုဖြတ်တောက် ၊ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းပြီး ချိန်ကတည်းကစပြီး မြေသြဇာကို ၆ပတ် မှ ၈ပတ် (သို့) ၃ ပတ်မှ ၅ပတ် ကြာတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ပုံမှန် ကျွေးပေးသင့်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးသူအနေနဲ့
အပင်ရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သင့်တော်သလို ကျွေးရမှာပါ။
အအေးကဲဆောင်းရာသီတွေမှာ စိုက်ပျိုးသူတွေကတော့ ပထမဆုံးဆီးနှင်း (နှင်းဦး) မကျခင် ၆ပတ်လောက် အလိုကတည်းက နိုက်ထရိုဂျက်(Nitrogen) ပါတဲ့ မြေသြဇာ ကျွေးတာကို ရပ်ထား သင့်ပါတယ်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဟာ အအေးပိုင်းမှာ နုညံ့တဲ့ အညွန့်အတတ်တွေကြီးထွားမှုကို ပျက်စီးစေတတ်လို့ပါ။ ဖော့စပါးရပ်(Phosphrous)
နှင့် ပိုတတ်စီယမ်(Potassium) ကိုတော့ အမြစ်နှင့် အညွှန့်အတက်တွေ သန်မာအောင် ဆောင်းရာသီမှာ ဆက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်.။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ နှင်းဆီပွင့်အောင်စောင့်ရပါတော့မယ်။ နေ့စဉ်နံနက်ပိုင်းတွေမှာ ပုံမှန်ရေလောင်းပေးသင့်ပါတယ်။ နောက် အကိုင်းများ ခြောက်လာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မသန်မာသော အကိုင်းများကို လည်းကောင်း၊ အပင်ပွားများ သေသွားလျှင်သော်လည်းကောင်း ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပစ်ရပါမယ်။ ကတ်ကျေး ကဲ့သို့ဖြတ်တောက်ကိရိယာကို ထက်ရှအောင် ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ပင်စည်ကြီးတာတွေ ဖြတ်တောက်ဖို့အတွက် (purning saw) ပေါင်းရှင်းလွှသေးသေးတစ်လက်လည်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဖြတ်တောက်ပြီးသော အကိုင်းများကို အကောင်များတတ်ခြင်း၊ နှင်းဆီ ပိုးကျခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန် အရက်ပျံဆွတ်ဖြန်းပေးထားသင့်ပါတယ်။
အကိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းကို နှစ်စဉ် အပွင့် ခူးပြီးမှာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အပင်ခြုံကို ကန်လန့်ဖြတ်နေသော အကိုင်းများကိုလည်း ဖြတ်တောက်သင့်တယ်။ ထိုကိုင်းများကိုရှင်းခြင်းဖြင့် အပင်ခြုံအတွင်း လေနှင့်နေ ဖြတ်သန်းဖို့ ကောင်းစွာ နေရာရစေမှာပါ။
ဖြတ်တောက်ရာမှာလည်း အတိမဖြတ်ပဲ စွေစောင်းစောင်းကို အပင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ဖြတ်တောက်ပေးပါ။ ဒါမှာသာ နောက်ပိုင်းထွက်လာမည့် အကိုင်းအသစ်တွေဟာ အပင်အလယ်မှာပဲ စုနေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းရှည်လွန်းတဲ့ အကိုင်းတွေကို သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်အထိ ပိုင်းဖြတ်သင့်ပါတယ်။ အပွင့်ပွင့်ခါနီးတဲ့အခါ အပွင်းနား ကပ်နေတဲ့ အရွက်ဟာ အလက်ငါးလက်ခွဲနေတဲ့ အရွက်ပါ။ အကယ်၍ နှင်းဆီနွယ်ပင်အဖြစ် စိုက်မယ်ဆိုရင် သေချာ ဖြတ်ပိုင်းတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နှင်းဆီပင်တွေဟာ ပိုးမွားတွေကို အလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အပင်မျိုးပါ။ ပိုးကျခြင်း ပျက်စီးခြင်းမှာ ကာကွယ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသင့်တာတွေက
-နံနက်တိုင်း ရေလောင်းပေးပါ။ ဒါမှာသာ အရွက်တွေ အကိုင်းတွေ တစ်နေကုန်ခြောက်သွေ့ပြီး မှိုတတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
-ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အရွက်တွေ အကိုင်းတွေ၊ မှိုတတ်နေတာတွေ တွေ့တာ နဲ့ ချက်ချင်းဖယ်ရှားပေးပါ။
-ပေါင်းရှင်းကိုင်းဖြတ်ပြီးလျှင် ရွက်သစ်၊ ကိုင်းသစ်များမထွက်ခင် (lime-sulfure) ကဲ့သို့သော အရည်များကို အင်းဆက်ပိုးတွေ ဥမဥအောင်နှင့် အကိုင်းတွေ ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ ဖြန်းပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ အကြမ်းဖျင်းစောင့်ရှောက်သင့်တဲ့ အချက်တွေပါခင်ဗျာ။
တကယ်စိုက်ပျိုးခဲ့ ရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနှင့် တိုင်ပင်ပြီး စိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။
Ref: MMO - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် နှင့် စိုက်ပျိုးနည်း
နှင်းဆီပန်း ကို အမြန်ဆုံး ကြီးထွားအောင် ဘယ်လို စိုက်မလဲ ?
၁ ။ ပထမဆုံး ၆ လက်မခန့် မြေကျင်း တူးပါ။
၂ ။ မြေကျင်းထဲ ကို သဲ အနည်းငယ်အောက်ခံ ထည့်ပါ ။
၃။ စိုက်ပျိုးလိုသည့် နှင်းဆီရောင် ကို ကိုင်းဖြတ်ပါ။
ကိုင်းသည် စိုက်ပျိုးရန် ရင့်သည့် ကိုင်း ဖြစ်ရန်လိုသည် ။ ၉ လက်မ အရှည်ခန့် ဖြတ် လျင် လုံလောက်သည်။
၄။ အာလူး အနည်းငယ်ကြီးတာ ကို ယူပါ ။ စိုက်မည့် နှင်းဆီ ကိုင်း ကို အရင်းပိုင်းချွန်ပြီး အာလူးထဲ ကို ၃ပုံ ၂ပုံ ခန့်ထိ ထိုးစိုက်ပါ ။
၅ ။ အာလူးထဲ စိုက်ပြီးသား နှင်းဆီကိုင်းတွေ ကို မြေကြီးထဲ မြုတ်ပြီး စိုက်လို့ရပါပြီ ။
အာလူးမှာပါတဲ့ ကြွယ်ဝလှတဲ့ ဓာတ်တွေနဲ့ ရေဓာတ်ဟာ နှင်းဆီပင် ကို အလွယ်တကူ ကြီးထွား ရှင်သန် စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
☑တောင်သူဦးကြီးတို့ရဲ့ နှင်းဆီစိုက်ခင်းမှာ နှင်းဆီရွက်ပြောက်ရောဂါသည် ခေါင်းစားရသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုစိုစွတ်ပြီး အေးမြသောရာသီအချိန်မျိုးမှာ ရောဂါကျစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် နှင်းဆီရွက်ပြောက်ရောဂါအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ…
☑Diplocarpon rosae သည် ရောဂါဖြစ်စေသော သက်ရှိဖြစ်သည်။
☑လက်မ၀က်ခန့်ရှိသော အမည်းရောင်အစက်များ အရွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စတင်ဖြစ်လာသည်။ အမည်းစက်ဘေးပတ်လည်တွင် အဝါရောင်အနားသက်လေးများကို တွေ့ရပြီး ရောဂါပြင်းထန်လာပါက အရွက်များကြွေကျသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ နှင်းဆီကိုင်းများပေါ်တွင် ပန်းနီရောင် (purple-red) အကွက်များတွေ့ရမည်။
☑ဤရောဂါဖြစ်စေသော မှိုသည် ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များတွင်ခိုအောင်းနေထိုင်သောကြောင့်ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို ရှင်းထုတ်ရမည်။ မှိုစပိုးများ ပျံ့ပွားမှုနည်းစေရန် အပင်ပေါ်မှ ရေလောင်းခြင်းကို အထူးရှောင်ရမည်။ ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိသော မှိုသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကို ဖြန်းပေးသင့်သည်။ မိူရောဂါဆေးများဖြစ်သည့် Captan, Chlorothalonil, Mancozeb, Maneb, Sulfur, Thiophanate methyl စသည့် တစ်မျိုးမျိုးကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဖျန်းပေးသင့်သည်။
✌မှတ်ချက် အထက်ဖော်ပြပါမှိုဆေးများမှာ မည်သည့် ကုမ္မဏီ၏ ဈေးကွက်နာမည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ
A.i. ကိုသာ ပြောထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မည်သည်ဆိုင်တွင်မဆိုမေးမြန်းဝယ်နိုင်ပါသည်။
#New Article #Shwe arr fertilizer
Labels: News and Info, စိုက်​ပျိုး​ရေးနည်းပညာ